Cabsi laga qabo soo laabashada Urur-kii Ahlu Sunna | KEYDMEDIA ONLINE
Cabsi laga qabo soo laabashada Urur-kii Ahlu Sunna
Ahlu-sunna, waxaa lagu xushmeeyaa dagaalladii xoogganaa ee ay la galeen Al-Shabeeb, waxase lagu dhaleeceeyaa in aysan waligood ka shaqeyn masiirka umadda ay xukumayeen, isla-markaana ku shaqeynayeen aragtiyo dad kale lahaayeen.
GURICEEL, Soomaaliya – Wararka ka imaanaya Gobolka Galgaduud, gaar ahaan magaalooyinka Guriceel iyo Dhuusamareeb ayaa sheegaya in si weyn looga cabsi qabo soo laabashada Urur-kii Ahlu sunna wal-jamaaca, ee hore muddada dheer uga talinayay qeyb ka mid ah degaannada gobolka.
Culimada waaweyn ee Suufiyada oo ay ugu horreeyaan Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, iyo macallin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax, ayaa todobaadkaan dib ugu laabtay degaanka, kadib markii Xukuumaddii Kheyre ay si foolxun uga saartay saaxada siyaasadda.
Culimada iyo dad badan oo taabacsan, ayaa hadda ku sugan degaanka Huurshe oo dhaca koofurta Gobolka, halkaas oo ay ka qabsoomeyso siyaarada Sheekh Yuusuf Direed.
Shakiga ayaa dhashay kadib markii Huurshe lagu arkay dhamaan xubnihii Ahlu suna, isla-markana ay hoggaanka Suufiyadu si aan ganbad lahayn ugu dhawaaqeeyn in ay u istaageen la dagaallanka Kooxda Al-Shabaab.
Waxaa baraha bulshada lagu baahiyay muuqaal laga dubay Macallin Maxamuud, oo khudbad u jeedinaya koox dhuruqada ku jirta oo uu ku boorrinayo in ay dib u xoreeyaan degaannadii gacantooda la saaray sanadkii hore.
Maamulka Galmudug, ayay dhibaato hor leh ku noqon doontaa soo laabashada Ururkii Ahlu-sunna, waxayna taasi Qoorqoor ku qasbi doontaa in Xarunta Maamulka u raro Cadaado.